ချီလီနိုင်ငံတွင် အသက် ၂၀ နှစ် နှင့် ၂၁ နှစ်ကြားရှိသူများကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်း စတင် - Xinhua News Agency
ချီလီနိုင်ငံ ဆန်တီရာဂိုမြို့လယ်ရှိ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသောစင်တာတစ်ခုတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆန်တီရာဂို၊ ဇွန် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ချီလီနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်အား ကာကွယ်ဆေးထိုးမည့် အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အသက် ၂၀ နှစ်နှင့် ၂၁ နှစ်ကြားလူငယ်များကို COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအား ယခုတစ်ပတ်အတွင်း စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း လက်ထောက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Paula Daza က ဇွန် ၁၅ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“အသက် ၂၀ နှစ်နဲ့ ၂၁ နှစ်ကြား လူငယ်တွေကို ဒီတစ်ပတ်မှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနေပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ၁၉ နှစ်အရွယ်တွေကိုတော့ နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာ ဆက်ပြီးဆေးထိုးပေးသွားမှာပါ” ဟု Daza က သတင်းထောက်များအား ပြောခဲ့သည်။
လာမည့်သီတင်းပတ်သည် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် ၁၇ နှစ်ကြား အသက်အရွယ်ရှိသူများအား ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို သေသေချာချာဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အတူ ကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံခြင်း “သမိုင်းမှတ်တိုင်” တစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဟု Daza က ဆိုသည်။
အသက် ၂၂ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်ကြားရှိသူများ၏ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အသက် ၂၆ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်ကြားရှိသူများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့သည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အချက်အလက်အရ သိရသည်။
လူထုအတွင်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ရရှိစေရန်နှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန် လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူရန် လိုအပ်ကြောင်း ချီလီနိုင်ငံ အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဝန်ကြီးဌာနက ရည်မှန်းထားသော လူဦးရေ ၁၅.၂ သန်း၏ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ ပထမအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကာကွယ်ဆေးတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်လုံး ထိုးနှံခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အဝထိုးနှံပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချီလီနိုင်ငံတွင် ဇွန် ၁၅ ရက်အထိ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁.၄၈ သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ၃၀,၈၆၅ ဦးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Chile begins COVID-19 vaccination of people aged 20-21
SANTIAGO, June 15 (Xinhua) — Chile this week began vaccinating young people between the ages of 20 and 21 against COVID-19, as part ofaplan to inoculate some 80 percent of its population, Deputy Health Minister Paula Daza said on Tuesday.
“This week we are vaccinating youth between 20 and 21 years of age, followed by youth aged 18 and 19 years old next week,” Daza told reporters.
Next week will also mark “a milestone” with the start of vaccination of children aged 12 to 17 with specific underlying medical conditions, said Daza.
Sixty-four percent of people aged 22 to 25 have been inoculated, and 70 percent of those aged 26 to 29, according to Health Ministry data.
Chile’s government has said it is necessary to immunize 80 percent of the population to achieve herd immunity and stop the spread of the virus.
Currently, over 77 percent of the ministry’s target population of 15.2 million people have been vaccinated with their first dose, while 60 percent have been fully immunized with eitherasingle dose treatment or both doses.
As of Tuesday, Chile had registered more than 1.48 million COVID-19 cases and 30,865 deaths from the disease. Enditem
Senior citizens wait to receive COVID-19 vaccines atavaccination center in downtown Santiago, Chile, Feb. 3, 2021. Chile on Wednesday launched its mass vaccination campaign against COVID-19, inoculating people over 90 years old at over 1,400 vaccination centers across the country. The campaign is being carried out with almost4million vaccines from Chinese firm Sinovac, which arrived aboard two flights last week, while more are to gradually arrive over the coming weeks. (Photo by Jorge Villegas/Xinhua)